Parts Factory, Suppliers - China Parts Nsukka
A na-ejikọta excibration vibration na ụfọdụ igwe na akụrụngwa iji mepụta ike mmụọ, bụ akụkụ dị mkpa nke iji ọrụ ọrụ igwe. Ihe na-eme mkpọtụ nwere ike ime ka ihe ahụ nweta otu ụdị na ogo nke ịma jijiji, ka o wee nwee ike iji mezuo ịma jijiji na nyocha ike na ihe ahụ, ma ọ bụ dozie ngwa ọrụ nyocha na ihe mmetụta.
Egwuregwu sieve, nke a makwaara dị ka efere efere, nwere nguzogide dị mma, ndụ ogologo ndụ, iguzogide mmiri ma iyi mgbochi. O kwesịrị ekwesị maka ịsa, nyocha, grading, deslagging, desliming, dewatering na ndị ọzọ na n'ibu ọrụ.
Ejiri ntọala eccentric a na-edozi na nsọtụ abụọ nke rotor rotor, a na-enwetakwa ike na-akpali akpali site na iji ike centrifugal nke ntụgharị ọsọ ọsọ nke osisi ahụ na oghere eccentric mepụtara. Ugboro ugboro nke ịma jijiji dị ukwuu, ma igwe arụ ọrụ nwere ike belata ma ọ bụrụ na ike na ike na-atọ ụtọ dabara nke ọma.